Graziano Pelle oo laga eryay xerada tababarka Talyaaniga! (Sabab?) – Gool FM
Graziano Pelle oo laga eryay xerada tababarka Talyaaniga! (Sabab?)
(Coverciano) 07 Okt 2016 – Macallinka xulka Talyaaniga ee Giampiero Ventura ayaa xulka ka reebay qannaaska Graziano Pelle, gaar ahaan kulanka soo foolka leh ee ay la ciyaarayaan Macedonia kaddib markii uu diidey inuu salaamo macallinka Talyaaniga beddel loo taagey kaddib.
Weerarka kooxda reer China ee Shandong Luneng ayaa si rasmi ah raalli gelin u bixiyay, balse waxay u muuqataa inaysan taasi wax wayn usoo kordhinin oo uu macallinka waaya aragga ihi go’aansaday inuu ciqaabo.
Laacibkan ayaa daqiiqaddii 59-aad la beddeley intii ay socotey ciyaartii ay 1-1 kula galeen Spain, balse Pelle ayaa sidaa ku seegaya kulanka Axadda soo aadan ay la leeyihiin Macedonia.
Xiriirka kubadda cagta Talyaaniga ee FIGC ayaa soo saaray war saxaafadeed ay go’aankan ku xaqiijinayaan iyagoo sheegay inuu laacibku dib ugu laaban doono kooxdiisa Chinese-ka ah.
during the international friendly match between Italy and Romania at Stadio Renato Dall’Ara on November 17, 2015 in Bologna, Italy.
GOOGOOSKA: Portugal vs Andorra 6-0 (Ronie oo Andora ku rabootiyay)